Mazano Anobva Pamusoro Pemaitiro Maitiro Okudzivirira Magwaro, Mazwi Asingadiwi, Uye Nhare dzefoni
Max Bell, the Semalt Mutendi Achibudirira Mutariri, anotaura kuti magwaro asinganyengeri, emaimeri asina kudikanwa, uye mavhiringidziro ekutengesa kutumira zvinogona kukurumidza kuparadza manheru ako. Gore rakapera, Mutungamiri weNhau akaisa zvinyorwa zvisingabvunzi 114 000 uye zvidhori zvinoshungurudza. Nhamba iyi ndeyekuti inotarisirwa kuenderera mumamiriyoni nekuda kwekukwira kwe spammers paInternet. Chiitiko chekubvisa mavara mavara uye emajeri emajeri kubva kubhuku rako haisi nguva yekudya asiwo inodhura - кабелем utp.
Nzira yekudzivirira sei magwaro asina kudiwa
Wanga uri kutambira magwaro ekubombard kubva kune vasikana? Hapana nzvimbo yekutya! Kana iwe wakanga uchigamuchira magwaro kubva kuvasviki, zvakadai seVatongi vePayment Protection (PPI), vanofanirwa kufunga kuudza nyaya yacho kumuterevhiti wako kuti uwane mamwe mazano. Nhamba yakawanda yehutachiona vanotengesa inopa mikana yakasununguka nzira dzisingabatsiri kudzivirira spammers kubva pakuvatsamwisa. Kutaura magwaro anonyangadza, kutumira zvinyorwa zvisingadadi ku 7726 uye zvinosanganisira nhamba yakakodzera yemutumi. Nhare dzakawanda dzave dziri mberi kuti dzidzivirire vatengi kubva pakushungurudzwa nevatambi nevatengesi. Nzira uye mitemo inotungamirira kuti vateereri venyika uye makambani anoshandisa sei. Sekushandiswa kwemhando, iwe unogona kusarudza kuudza kana kutumira kunyunyuta kune Office Information Commissioners. Makambani akaparara mamiriro echobvumirano anopedzisa kubhadhara mari yakawanda inodarika £ 500,000. Munguva pfupi yapfuura, kambani yekwereti inoshanda muBradford yakaguma ichishandisa mari yakawanda kusvika ku £ 80,000 mushure mokutumira mamiriyoni emagwaro anotsamwisa mukati memwedzi mitanhatu yapfuura.
Ungadzivisa sei mafoni anotsamwisa?
Service Telephone Preference Service (TPS) yave iine rubatsiro rukuru kune vashandi vanofambisa vanowana kugumbura kushambadzira kudana kubva kune spammers. Kuti udzivise mitero kubva kukutengesa uye kutengesa strategists, nyora yako nhamba yevashambadziri nhamba yefoni yekunakidzwa Service. Makambani haasisina kodzero yekukushevedza iwe kana iwe ukanyoresa neTPS sangano. Kuzvinyorera nebasa iri, tumira "TPS" inowirirana ne email yako kero ku 85095. Maminitsi mashomanana, uchawana rugwaro rwemashoko kubva kuTunes Preference Service rinotsigira kuti wakawedzerwa kune database. Mamwe makambani efoni anopawo mazano ekubatsira kudzivisa nhamba dzenhamo. Zvisinei, mhosva yacho inogona kusiyana maererano nekuiswa kwechigamu-chivharoti chigadzirwa.
Nzira yekudzivirira sei spam emails?
Kugamuchira maail asina kudiwa kubva kune spammers zuva rimwe nerimwe kunogona kupisa. Kuwedzera kwe spammers paIndaneti kwave kuchiwedzera sezvo nguva inopera. Spammers vanoshandisa junk emails kuti vasvike dhi-user data. Sekushandiswa kwefoni yefoni, rega kuvhara uye kuzarura maimeri anobva kunzvimbo isina kudzivirirwa. Spammer inowana chiziviso mushure mekunge uzarura hutano hwakatumirwa kukero yako ye email. Shandisa bhokisi re 'kusazvinyora' kuti uvhare maimiriri asina kudiwa kubva pakuenda kubhokisi rako rekudisa. Kana iwe wakanga uchiwana maail mairi kubva kune imwe kero ye email, kuvhara maadri e-mail ndiyo yakanakisa kupfurwa iwe kuti utore. Kuchengetedza kero inochengetedza mazmeri emazamangwana anobva kumachechi e-mail akavharidzirwa kusvika kupeverwa re spam.
Kuchengetedza chirongwa chako chinorwisana nehutachiona chakanyatsogadziridzwa chinonyanya kukosha kana zvasvika pakusachengetedzwa kwefoni yako. Usarega kuora mwoyo kunoshevedza, magwaro anonyengera, uye maimiriki asingadiwi anoparadza manheru ako. Shandisa zvinyorwa zvataurwa pamusoro apa uye mazano ekuve panzvimbo yakachengeteka.